Bond, Patrick Translation ka-Manzi Faith (2013) Extreme Weather and Greenhouse Gas . : -.
Patrick Bond 28 August 2013
More examples of state planning hubris:
Transnet’s $2.3 billion doubling of the Durban-Johannesburg oil pipeline is still not complete, but already massive corruption is suspected in the collusion-suffused construction industry, given that early costings were half the price. And notwithstanding their ‘aerotropolis’ fantasies, Durban’s King Shaka International Airport and the speedy Johannesburg-Pretoria-airport Gautrain are both operating at a tiny fraction of the capacity that had been anticipated by state planners. The 2010 sports stadiums are such blatant white elephants that even arrogant local soccer boss Danny Jordaan felt compelled to apologise.
Izimo ezinzima zezulu kanye nokunyuka kokukhiqizwa kwezizisisi ezingcolisa umoya kubiza ukuthi izishoshovu ezilwela ubulungiswa besimo sezulu zizinikele kakhulu.
NguBy Patrick Bond Yahunyshwa nguFaith ka-Manzi
Ihlobo lasemazweni asenyakatho lisemazingeni aphezulu manje kodwa-ke noma likukushisha okukhulu sekwehla, kunobufakazi ukuthi ukuthi isimo esibucayi sesimo sezulu sinzima kakhulu kunjengokuba ochwepheshe kade becabanga. Umbiko wokugcina weNhlangano Yezizwe ye-Intergovernmental Panel on Climate Change –ithimba elidume kabi kakhulu ngokuba elontamo lukhuni ngezocwaningo – lizobe linengxoxo mpikiswano ngenyanga ezayo eStockholm, kodwa akekho ongaphikisana nabakuqagelayo: “ukusabalala kokuncibilika kwezwe leqhwa, ishisandlu, ubunzima ekumileni kokudla kanye noshintso olukhulu ezimpilweni zezilwane kanye nezitshalo, okungahlanganisa ukuthi kugcune sekukhona izilwane ezingasabonakali.”
Okubi kakhulu kuseza, njengoba amathani ayizigidigidi ezingamashumi amahlanu emethane ezoqhamuka olwandle iArctic, njenoga ochwepheshe besanda kuveza kwiphephabhuku iNature. iQhwa laseNyakatho njengamanje, njengoba kushisa kanje, seliqine ngamaphesenti angamashumi amane kunalokhu elaliyikho eminyakeni engamashumi amane edlule, isimo esibucayi ngangxanye esimelwe isibonakaliso esigqmile somfula ovele wazika ngenyanga edlule.
Umonakalo ozokwenzeka emva kwalokhu, njengongokusho kochwepheshe abahamba phambili abaqhamuka ezikhungweni zemfundo ephakeme eCambridge kanye naseErasmus, uzobiza izigidigidi ezingamashumi ayisithupha, umnotho wonke womhlaba. Ukushisa komhlaba kuzonyuka ngesivininvi ngeninyaka esuka kwengyishumi nesihlanu kuya kwengamashimu amathathu nesihlanu.
Njengoba kuqhamuka (revelations), kunzima ukufihla umona wezimboni ezimba ezokubasa zemvelo kanye nabathengi babo bezizisisi ezingcolisayo. Ithimba elilawulayo eMelika, eRussia kanye naseCanada ngokukhulu ukuthakasa lizovumela lezizimboni zamafutha lendawo ezogcina ingenaqhwa ehlobo yaseNyakatho ngokumba kakhulu, behlangene nokushisa kakhulu amafutha emizileni emisha yemikhumbi
Ukushisa okuzobuyela emuva eMelika, eChina kanye naseThekwini.
Kodwa leshisandlu esanda kuba ngumphumela eChina. Enamazinga makhulu okukhiqiza izisisisi ezingcolisa umoya kakhulu emhlabeni wonke – ngenxa yopkukhiqiza imikhiqizo eshibhile ethengwa ngamazwe acebile esihambise ukungclisa umoya kwelaseMpumalnga neAsia – kudala ukungcola kakhulu komoya emadolobheni akhona. Kufe nabantu abaningi ngenxa yokushisa isaqala-nje lenyanga. iDolobha iShangai laba namazinga okushisa angaphezulu kuka38C, izinsuku eziyisishagalombili, lapho amazing okushisa ezindaweni eziphakeme lapho kuhamba khona abantu babengakwazi ukuthosa amaqanda kanye nenhlanzi.
Izwe elingcolisa kakhulu umoya (ngokomlando), impumalanga neMelika ibhekene nesomiso ezinzima kakhulu, ngendlela exakile kangangokuthi amaphesenti angamashumi ayisishagalombili nesithupha amanzi aseNew Mexico aseyanyamalala, nezizo ezinzima zokubheduka kwemililo yasendle – kulelisonto, ngokwesibonelo-nje, kusha inithi ebomvu yaseYosemite Park futhi kufaka obishini ukufakelwa kwamanzi edolobheni laseSan Franscisco – ngesikhathi amazing okushisa eDeath Valley eCalifirnia enyuke aze afika ku50C.
Imiphumela ayilingani, njengoba ucwaningo mayelana nobulungiswa njenzemvelo likhombisa manje njengoba ukushintsha kwesimo sezulu kuhlasela amadolobha aseMelika, abacebile basebenzisa okukupholisa ngenkathi abampofu – ikakhulukazi amamnyamba kanye namaLatino – ezwela ‘lezizi –slands zokushisa’. Ngokufanayo, abampofu ezintabeni zaseHimalaya bafa ngezinkulungwane ngenxa yemiphumela yezikhukhula zangenyanga edlule.
EAlaska,isizinda sokumbiwa kakhulu kwamafutha, kubalwa amazing okushisa afika kumaphesenti angamashumi amathathu okushiwa izinhlanzi einingi zifile. Umphumela wokushisa komhlaba olwandle ukukhiphela ngaphandle izilwane zasolwandle zibheke ezindaweni zeqhwa ngamakhilomitha ayisikhombisa njalo ngonyaka, ngenkathi izinhlobonhlobo zezilwane zasolwandle zizama ukuthola amanzi abandayo.
Umphumela la eNingizimu Afrika, kusukela eEast Londo kuza eThekwini, kwaba yisibhicongo kubahwebi bezihlanzi bakulezizindawo, ngenkathi izgidigidi zezinhlanzi osadini ezijwayele ukubhukudela ngaphandle ngenyanga kaJulayi azizange zifike ngenxa yamanzi ashisayo.
Ukuhweba ngezemikhumbi kungakwzi ukuqhubeka kulesisimo esinobuxakaxaka esibudalayo?
Futho olwandle iIndian Ocean,umonakalo omkhulu uqhamuka – futhi uvakashelwa – imboni yemikhumbi. ENingizimu Afrika, echwebeni iRichards Bay, lapho kuthuthwa khona kakhulu malahle emhlabeni wonke, isilima sikaKpteni somkhumbi owaubabele eChina iMV Smart wazama ukuphuma endawenia ngamamitha ayishumi ngomhlaka Agasti 20 nomthwalo onamathani angamakhulu anamashumi amahlanu kanye namathani ayishumi nesisikhombisa ezinkulungwane zamafutha. Wawuhlephula umkhumbi phakathi nendawo wabhajwa esihlabathini solwandle
Lokhu kwalandelwa ukuzika komkhumbi ngaphandle komkhumbi owawubabele eNigeria, iKianu Satu, nayo eyayivele yaminza ngesonto elingaphambili, ngalomzila, eduze kwalapho kuvikelwe khona imvelo kanye nezilwane zasolwandle. Ngesikhathi kwezinwa izinhlelo zokumunca amafutha anagmathani angamakhulu amashumi amathathu, amashumi nesihlanu amathani amafutha avuza, kudingeka ukuthi kuhlanzwe izinyoni zasolwandle ezazigcwele amafutha ezingamakhulu amabili.
Lezizinhlanya imikhumba yazo esizike ngaphansi olwandle i-Indian Ocean manje sebengabungazana emcimbini nabahathi be MT Phoenix, emva kokuba lomkhumbi wazicekela phansi ngokwawo eNyakatho neTheku eduze kwalapho abantu beshawa khona ngumoya eminyakeni emibili edlule. Abakhokhi bentela bakhokha izigidi ezingamashumi amathathu nesishagalombili zamarandi kumpomtshwa amathani amafutha angamakhulu amane futhi nokususwa komkhumbi iPhoenix emnazini asolwandle. Emasontweni ambalwa edlule, lomsebenzi wokufukula lomkhumbi waholela ekuqophisaneni mayelana nezezimali kwadala ingxabano neSA Maritime Safety Authority.
Lokhu kungokunye nje kwezinkomba ukuthi ezezimboni zethu zemikhumbi azikululngele ukumelana nokunyuka kwamazinga amanzi asolwandle ‘kanye namagagasi amakhulu’ ahambisana nokushintsha kwesimo sezulu. Inhlangano yesikhungo semfundo ephakeme iColumbia University Earth Institute manje isibonisa “ukwenyuka kwamazinga manzi asolwandle ngokwenyuka okufika kumanyathelo ayisithupha emhlabeni wonke esikhundleni sezinyathelo kwezisuka kwezimbili kuya kwezintathu” ngonyaka ka2100, kunezibalo ezinphezulu (amamitha amathathu) uma kungenzeka uma amashidi eqhwa eqhephuka esinsikeni zakhona.
Njengoba kwasho oyedwa wabadidiyel bakaOprah, uSusan Casey,ebhala encwadini yakhe, i The Wave: In Pursuit of the Rogues, Freaks, and Giants of the Ocean, “Uma sesibheka ukuthi amaphesenti angamashumi ayisithupha abantu basemhlabeni ahlala eduze kwamakhilomitha angamashumi amathathu onqenqemeni lolwandle, ubuchwepheshe lwamagagasi selungubuchwepheshe obubalulekile, futhi izazi zikuqaphele kakhulu lokhu, imizila yasolwandle, imikhumbi kanye nezimpilo ezingingi ezisengcupheni.”
Izazi zakhe zidinga ukuvakashela eNingizimu Afrika, ngenxa yokuthi ezethu zibonakala zilele, njengoba manje sezihlela ukwandisa ichweba laseThekwini. Ubuhlanya kwezohwebo ngezemikhumbi okwenza ukuthi izwe laseChina liphumelele ekuhwebeni namazwe aphesheya –kwacishe kwaqeda imboni enkulu yokukhiqiza yaseNingizimu Afrika –manje sekuyiyona eshayela ukunyuka kwemikhumbi engakwazi ukuthwala amacontainer angaphezulu kuka10 000 (okudinga ukuthwalwa ngamatrucki angu5800 ukuwathulula) –I’super post-Panamax’. Kubuzwa kanjalo ngenxa yeCanal yasePanama ekwazi ukudlulisa ingxenye yomthwalo, ngakho-ke ukwenza kabusha ngenani lika$5.25 lezigidigi liyojulisa futhi linwebe icanal ngonyaka ka2015, no$40 wezigidigi oxhaswe yiChina wecanal ehlelwa ukwakhiwa eNicaragua.
Amachweba amaningi emhlabeni wonke nawo ayalandela, okumbandakanya u$25 wezigidigidi,wemali ezochithwa kuzwelonke, kwisifundazwe kanye nakumasipala ngokunwetshwa kwechweba kanye nesakhiwo samafutha eNingizimu neTheku, ukukhiqiza kweTheku kuyonyuka ngamacontainer ayizigidi ezing2.5 ngonyaka ka2040 –noma-ke lezizibalo zingeke zibhekane nezibalo ezibhekiwe mayelana nezidingo zalemboni.
Iziboniso eziningi zokuhlela kukahulumeni: ukuphindaphinda kukaTransnet kwezigidigidi ezingu $2.3 kwepayipi lamafutha elisuka eThekwini liya eGoli akukapheli, okumanje sekusolwa inkohlakalo enkulu kwimboni yezokwakha, njengoba ukwakhiwa kwalelipayipi lalibiza ingxenye yalemali, njengoba iKing Shaka yaseThekwini kanye neGautrain yaseGoli ingenanzuzo eyayikade ilindelwe. Izinkundla zikanobhutshuzwayo ezakhiwa ngo2010 azinanzuno okusobala kuwowonke umuntu okwenza ngisho umphathi ophambili wezebhola uDanny Jordaan abone kuphoqelekile ukuthi axolise.
Abaphikisana nesimo sezulu ukusuka eThekwini kuya ezweni laseJalimani
Isizathu esisidwa esidalwayo ukuthi isimo sezulu asikho kulezizakhiwo ezinkulu ezingenanzuzo, njengoba ngifundile njalo uma ngiletha imiboni ephikisayo njalo ngokungaphumeleli kwi Evironmental Impact Analysis. Ngokomphumela ngokubuyekeza engakwenza ngonyaka odlule ngenyanga kaNovembar, ababonisana no Transnet bagcina bebona ukuthi ukunyuka kwamazinga olwandle kanye nezimvula ezinkulu kungenzeka ziphazamise ukwandiswa kwechweba Elisha laseThekwini.
Kodwa-ke isifundo saseTransnet mayelana nokunyuka kwamazinga olwandle okwenziwe nguChristopher Everatt noJohn Zietsman beZAA Engineering Projects eKapa baphikisana nesimo sezulu njengombono wababonisi bangonyaka odlule owenziwa nguRoy Van Ballegooyen weSA Council on Scientific and Industrial Research, ovele wayiziba lenkilayitheka.
Ngiyazi ukuthi –njengokuphikiswa ngeNgculaza iminyaka eyishumi edlule –ukusola engikwenzayo ngokuphikiswa ngesimo sezulu kuyinhlamba enkulu kulezizinsuku. Kodwa yini-ke futhi ongayibiza ngombiko kaNovemba ka2012 (ikakhulukazi uEveratt) echaza izifundo ezihlanu eziveze ukuthi siyoba nenkinga yokwenyuka kwamazinga olwandle kuleminyaka eyikhulu, okubekwe kwizifundo zemibiko ka1997, 2004, 2006 kanye no2008. Ulwazi oludala ngeminyaka emihlanu ukuti, kulesisifundo, ludala kakhulu.
ENingizimu Afrika, abaphikisi besimo sezulu bamanga manje sebeholwa yikhomanisi lomlungu: uNgqongqoshe weZokuhweba kanye neZimboni, uRob Davies. Ngesonto eledlule, uDavies wafaka isicelo epalamende ukuthi kuvunywe ukuthi kwakhiwe esinye isakhiwo samalahle ukuze kumbiwe endaweni enenkinga yamanzi eKaroo, “eZweni lokoma Okukhulu” lapho kusuka khona abantu bolimi lwamaSan.
Okubi okwenzeke ngaphambilini uDavies azama angafuni ukukusho kuhlanganisa ukumosheka kakhulu kwezemvelo kanye nenkohlakalo, ezemisebenzi kanye nezenhlalakahle eNingizimu Afrika zokwakhiwa kwezindawo zamalahle, indawo yokukhiqiza ugesi kaEskom ebiza u$10 billion eMedup zika 4800 kaMegaWatts eyoba enkulukazi kakhulu yesithathu emhlabeni wonke. IMedupi yayidalelwe ukukhiqiza amandla kagesi ngo2011, kodwa ngenxa yezinxushunxushu ezingapheli, iyogcina iphelile phakathi nonyaka ka2014.
Imboni ezuza kakhulu kaEskom, engazange ishiwo nguDavies, yiBHP Billiton,imboni enkulu yezombiwa phansi emhlabeni wonke, imboni ehamba phambili kobhululu bongxiwankulu baseNingizimu Afrika kusukela eminyakeni yobandlululo, uEskom manje uxhasa imboni yaseAustralia eyenza inzuzo yezigidigidi zika$1.1 billion ngonyaka ngesipho sikagesi oshubhe kakhulu emhlabeni wonke.
Omunye ongabaphikisi besimo sezulu nguNngqongqoshe wezezimali zentuthuko waseJalimani, uDirk Niebel,ophikisana necebo lemiphakathi yaseEcuador ukuhlenga iYasuni National Park ukuthi kungambiwa amafutha. Ngokuka Niebel, “ukuyekela ukumba amafutha ngeke kukodwa kusize ukuqikelelwa kwehlathi.” Empeleni ngeke, kodwa kungaba igxathu elibalulekile ukuthi izwe laseJalimani likhokhe imali ngesikweletu esikhulu sesimo sezulu.
Umkhankaso we Yasuni ‘wokugcina amafutha emhlabathini’muhle kakhulu, futhi ngenkathi ngiseAmazon eminyakeni emibili edlule, ngaba ngufakazi wenhlangano yeOilwatch ukwandisa lombono (ngisho naseThekwini lapho ukucatshangwa kokumbiwa kwamafutha eThekwini kusanda kuqala ngaphandle kwasolwandle). IOilwatch idale indlela yaseYasun kokokubasa kwezemvelo, okugqugquzela okuzokwenziwa yiEnvironmental Justice Organisations, Liabilities and Trade okuzoba seBarcelona. Abahola okuzokwenziwa uJoan Martinez-Alier noNnimmo Bassey nabo banhliziyo zibuhlungu ngokucekeleka phansi kweYasuni.
Kodwa ngobulima, uhulumeni kaRafael Correa –owaqeqeshwa eMelika njengongoti kwezomnotho, - kuhlale kungumbono wokudayisa iYasuni ezimakethe zomhlaba zesisisi esingcolisa umoya, indlela yokwehlula uma sesibhekana nomkhuba wenkohlakalo kanye nokuwa kwezezimali okwejwayelekile; amanani ezisisi ezingcolisa umoya namhlanje okuyingxenyana okwakuyiyona eminyakeni emibili edlule.
Ngakho-ke manje, njengoba uCorrea ookudidizela akanazo akakabinayo imali njengamanje,iEcuador’s PetroAmazo.